WAYITA ULFAA TARSA’UU GADAMEESSAA (Dr. Guutaa Gurmeessaatiin) – Beekan Guluma Erena
WAYITA ULFAA TARSA’UU GADAMEESSAA (Dr. Guutaa Gurmeessaatiin)	Beekan Erena
HEALTH June 24, 2016OROMO
36SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
WAYITA ULFAA TARSA’UU GADAMEESSAA (Dr. Guutaa Gurmeessaatiin)
Yeroo ulfaa, gadameessi yoo tarsa’u miidhaa inni geessisu guddaa dha. Daa’ima gadameessa keessa jiru dabalatee haadhas miidhaa irraan gaha. Hedduu dhiiguun of wallaaluu, ‘infeekshiniif’ saaxilamuu,gara fuulduraatti daa’ima dhabuu….rakkoo hedduu qaba. Daa’imnis ta’e haati du’aafillee saaxilamu. Yeroo baay’ee garuu tarsa’uun gadameessaa miidhaa du’aa kan inni geessisu daa’ima irratti. Garuu haatis yaalii argachuu baannaan du’atti dhihoo dha. Yeroo baay’ee tarsa’uun gadameessaa kan mul’atu durbatoota duraan yaalii baqaqsanii hodhuutiin (cesarean section) dahan irratti dha. Wantootni tarsa’uu gadameessaaf nama saaxilan:
1. Yaalii baqaqsanii hodhuu kan gadameessaa irratti gaggeefame,
2. Balaa kufaatii ykn balaa konkolaataa,
3. Garmalee dhisamuu gadameessaa: Garmalee dhisamuu gadameessaa yoo jennu daa’imni sun guddaa ta’uurraan ykn dhangala’aan daa’ima marsee jiru baay’achuun ta’uu mala.
4. Akkasumas uumama gadameessaa wajjin rakkoon wal qabatu yoo jiraate dha.
Yeroo hedduu tarsa’uun gadameessaa yeroo ciniinsuu mudata. Hammeentaan isaa haa xiqqaatuyyuu malee ciniinsuu duras ni mudata.
*Wayita gadameessi ulfaa tarsa’u:
– Dhukkubbii garaa kan duraarraa adda kan ta’ee fi kara qaama saala dhiiga bahu arguu danda’u.
– Sochii daa’imaa hir’achuu ykn dhaabachuutu isaanitti dhagahama. Gara haala qabatamaa biyya keenyaa yeroo ilaallu dubartootni baadiyyaa hedduun isaanii manatti ciniiniinsifatu, manatti dahu. Akkuma argamaa jiru namootni tarsa’uun gadameessaa isaan mudatu kanneen manatti yeroo baay’ee erga ciniiniinsifatanii booda gara mana yaalaa deemani dha. Yoo daa’imni sun gad bahuuf hin dandeenye ta’e ciniiniinsuu fi yaalii yeroo dheeraa booda gadameessi ni tarsa’a. Fakkeenyaaf daa’imni gadameessa keessa jiru/jirtu akkaan guddaa taanaan manatti ykn buufata fayyaatti yeroo hedduu ciniinsifachuun tarsa’uu gadameessaaf saaxila. Yaaliin akkasii kan gaggeeffamu bakka yaaliin baqaqsanii hodhuun raawwatamutti dha. Yoo dafanii bakka yaaliin kun itti kennamu hin geenye gadameessi sun carraan tarsa’uusaa guddaa dha jechuu dha.
Kan biraa akkuma olitti kaasne dubartootni yaalii baqaqsanii hodhuun ( cesarean section) kana dura dahan carraa ciniinfatanii dahuu qabataaniyyuu kan isaan dahuu ykn ciniinsifachuu qaban hospitaala ykn bakka tajaajilli yaalii baqaqsanii hodhuun deesisan itti kennamutti ta’uu qaba. Dubartootni akkanaa manatti ykn buufata fayyaatti yoo ciniinsifatan yaalii baqaqsanii hodhuun deesisuu barbaachisa taanaan hanga Hospitaala gahanitti gadameessi tarsa’uu danda’a.
*Kanaaf rakkoo tarsa’uu gadameessaa hir’isuuf:
– Dubartootni ulfaa hordoffii ulfaa buufata fayyaa naannnoo isaanii jiruttu gochuu!
– Manatti ciniinsifachuu ykn manatti dahuu dhiisuu!
– Dubartootni kana dura yaalii baqaqsanii hodhuun deessan ulfa itti aanan irratti manatti ykn buufata fayyaatti ciniinsifachuu dhiisuudhaan yeroo ciniinsuun isin jalqabu daftanii gara hospitaala deemuu….
Yoo tarsa’uu gadameessaa hir’isne, du’a daa’imaa fi haadholii hir’isne jechuu dha!!
NO MOTHER SHOULD DIE WHILE GIVING BIRTH!
Dr. Guutaa Gurmeessaa-
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa36SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← ABAARSA HAADHAA; Yeeyyis Birruu Nagaroo’tiin
Dhukkuboota torbarratti maalummaa, mallattoofi ittisa/yaaliisaa as keessaa argattu?-*Dr. KIYYAA DAAWWITEE (KD)* →